के बिषयमा हुदैछ देउवा र प्रचण्डबीच छलफल — Imandarmedia.com
२प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठकमा को को उपस्थिति भए ?
४बालबालिकामा कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो, जोगाउन चिकित्सकको यस्तो छ सुझाव
५चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा,बिस्वभर त्रास
६प्रहरी र तस्क’रबीच गो’ली हा’नाहा’न, कम्तीमा २५ जनाको मृ’त्यु
७के भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अब ओरालो लाग्न लागेको हो?
८राष्ट्रियसभा सदस्यमा बादल सहित तीन जनाको उम्मेदवारी
९रसियन स्पुतनिक खोप ल्याउन नेपाल सरकारले कसलाई दियो अनुमति
१०निषेधाज्ञामा बढी भाडा लिनेह ३ जना पक्राउ
१२गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
के बिषयमा हुदैछ देउवा र प्रचण्डबीच छलफल
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच संवाद भएको छ । बूढानीलकण्ठ स्रोतका अनुसार सोमबार साँझ काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच करिब २० मिनेट टेलिफोन संवाद भएको थियो ।
सोमबार काँग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि देउवा–प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम भए पनि काँग्रेस बैठक स्थगित भएपछि अपरान्ह टेलिफोनबाटै संवाद भएको हो । टेलिफोन संवादमा ओलीले विश्वासको मत लिनुको कारणबारे विश्लेषण गरिएको थियो । साथै, लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटका विषयमा पनि छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि हामी जोड दिँदा पनि तपाईंले अविश्वास र आशंका मात्र गर्नुभयो, अब केपी ओलीजी आफैं विश्वासको मत दिनु तम्सिनुभयो । अब हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? स्रोतका अनुसार जवाफमा देउवाले मंगलबार (आज) दिउँसो २ बजेपछि बस्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि थप छलफलमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
पदाधिकारी बैठकपछि देउवाले ओली इत्तर कित्तामा देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग संवाद गर्ने बुझिएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि देउवासँग निरन्तर संवादमै रहेको पाइएको छ । जसपामा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा दुई मत देखिँदा यादव नयाँ सरकार निर्माणका लागि अग्रसर देखिएका छन् ।
यादवले अविश्वासको प्रस्तावका लागि देउवा अग्रसर भए तत्कालै १९ जना सांसद हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाकारी दिएको बुझिएको छ । देउवा र प्रचण्डले एमाले नेता माधव नेपालसँग २७ गतेअघि नै गम्भीर वार्ता गर्न पनि अध्यक्ष यादवले सुझाएको स्रोतको भनाइ छ ।
[ माओवादी केन्द्रले बोलायो स्थायी समिति बैठक ]
नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने रणनीति भएपछि माओवादी केन्द्रले बैठक बोलाएको बुझिएको छ । सोमबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेर ओलीको विश्वासको मत दिने निर्णयबारे छलफल गरेका थिए ।
देउवाले २ बजेबाट पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक विषयमा छलफल थालेका छन् । यता प्रचण्डले पनि स्थायी समिति बैठक बोलाएका हुन् । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।